I-Intanethi ye-PH kunye ne-ORP yeSensor abavelisi - China kwi-Intanethi ye-PH kunye ne-ORP yeSensor Factory kunye nababoneleli
I-Intanethi ye-PH kunye ne-ORP yesenzi
BH-485-ORP woluvo Orp woluvo
BH-485 Uthotho lwe-intanethi ye-ORP ye-elektrode, yamkela indlela yokulinganisa i-elektrode, kwaye iyayiqonda imbuyekezo yeqondo lokushisa elizenzekelayo ngaphakathi kwii-electrode, Ukuchongwa okuzenzekelayo kwesisombululo esisezantsi.
PH8083A & AH Industrial ORP woluvo
Yamkela i-gel okanye i-electrolyte eqinileyo, ukuxhathisa uxinzelelo kunye nokunceda ukunciphisa ukuxhathisa; ulwahlulo ephantsi inwebu ethe.
I-PH8022 ye-Industrial Water Pure Sens
Amandla okusasazeka azinzile; indawo enkulu evaliweyo ijikeleze iiglasi ze diaphragm bubbles, ukuze umgama ukusuka kwisalathiso sedrafti ukuya kuglasi uvalo usondele kwaye uhleli; ii-ion zisasazekile kwidayaphragm kwaye i-electrode yeglasi ngokukhawuleza yenza umlinganiso opheleleyo wesekethe ukuphendula ngokukhawuleza, ukuze amandla okusasazeka kungabi lula ukuchaphazeleka ngumgangatho wokuhamba ngaphandle kwaye uzinze kakhulu!
PH8012 Industrial Waste Water PH woluvo
Kwimilinganiselo ye-PH, i-electrode esetyenzisiweyo ikwabizwa ngokuba yibhetri ephambili. Ibhetri ephambili yinkqubo, indima yayo kukuhambisa amandla emichiza kumandla ombane.
PH8011 Industrial Antimony PH woluvo
Ijelo lokusasaza isithuba sokuhambisa umgama omde kakhulu lwandisa ubomi benkonzo yee-electrode ngqwabalala okusingqongileyo.
I-ORP8083 Imveliso ye-ORP yesenzi
Isebenzisa i-dielectric eqinileyo ekumgangatho wehlabathi kunye nendawo enkulu ye-PTFE engamanzi yokuhlangana, ekunzima ukuyivimba kwaye kulula ukuyigcina.
I-CPH-809X ye-Industrial Desulfurization ye-PH woluvo
Ukutshabalalisa i-pH yomlinganiso we-pH electrode isetyenziselwa ukufafaza i-desulfurization yegesi, i-electrode yamkela i-gel electrode, ukugcinwa simahla, i-electrode phantsi kobushushu obuphezulu okanye i-pH ephezulu isenokugcina ukuchaneka okuphezulu.
I-CPH800 kunye ne-CPH600 kunye ne-GPE100 yeNkunkuma yezeMveliso kunye nePro Water sensor
Yamkela i-dielectric ye-dielectric kunye ne-dielectric eqinileyo yolwakhiwo lwesiphambuka esingasetyenziswa ngokuthe ngqo kwinkqubo yeekhemikhali yokumiswa kwe-viscosity ephezulu, i-emulsion, ulwelo oluneprotein kunye nolunye ulwelo, ekulula ukuliminxa.
BH-485-PH8012 woluvo lwe-pH yedijithali
I-BH-485 Series ye-pH electrode ekwi-intanethi, yamkela indlela yokulinganisa i-electrode, kwaye iyayiqonda imbuyekezo yeqondo lokushisa elizenzekelayo ngaphakathi kwe-electrode, Ukuchongwa okuzenzekelayo kwesisombululo esisezantsi. I-Electrode yamkela i-electrode edityanisiweyo engenisiweyo, ukuchaneka okuphezulu, uzinzo oluhle, ixesha elide lokuphila, ngempendulo ekhawulezileyo, iindleko zokugcina ezincinci, ixesha lenene labalinganiswa bemilinganiselo ye-intanethi njl. Imowudi ezine zecingo zinokufikelela ngokulula kunxibelelwano lwenzwa.
BH-485-pH woluvo lwe-pH yedijithali
BH-485 Uthotho lwe-intanethi ye-ORP ye-elektrode, yamkela indlela yokulinganisa i-elektrode, kwaye iyayiqonda imbuyekezo yeqondo lokushisa elizenzekelayo ngaphakathi kwii-electrode, Ukuchongwa okuzenzekelayo kwesisombululo esisezantsi. I-Electrode yamkela i-electrode edityanisiweyo engenisiweyo, ukuchaneka okuphezulu, uzinzo olomileyo, ixesha elide lokuphila, ngempendulo ekhawulezileyo, iindleko zokugcina ezincinci, ixesha lenene labalinganiswa bemilinganiselo ye-Intanethi njl. imo yocingo inokufikelela okulula kakhulu kuthungelwano lwenzwa.